DZIMWE DZUVA DZIMWE DZIMA DZINOSHURE - Matombo Uye Zvicherwa
iphone maapplication kwete pane app chitoro
nei kamera yangu yekamera yakasviba
bhatiri yeyero inorevei pane iphone
iphone inopinda mafoni inonanga ku voicemail
mumhanzi weapuro hauna kukunda
KUSVUTA QUARTZ, Dombo RENhamo
Iyo inopfungaira gemstone quartz yave ichizivikanwa kubvira panguva dzekare nekuda kwayo kwekudzivirira uye yekurapa mhedzisiro. Quartz inopfungaira inosiyana kubva pavara muutsi hwebhuru kusvika kune dema. Akasviba chaiwo masimendi eanopfungaira quartz anonzi morion.
Dombo rinoshandiswa, pakati pezvimwe zvinhu, pakurwadziwa kwekugaya, kusanganisa matishu, kudzivirira kuvhunduka nekukunda kusuwa. Varoma vakadana ibwe iri dombo rekusuwa nekuda kwechikonzero. Munyika dzeAlpine, hurungudo dzakasimuka nemichinjikwa zvichiri kutemwa kubva kune inopfungaira quartz. Kunze kwezvo, iri zvakare dombo rakakurumbira rezvishongo.
Kubva panguva dzekare, iyo inopfungaira quartz yave ichizivikanwa sedombo rekudzivirira. Masoja akashandisa quartz yeutsi panguva yehondo yavo. Vakaita izvi nekutarisa iyo quartz inopfungaira. Kana dombo rikava nerima muvara, zvaireva njodzi kana yambiro.
Kune vaRoma, iro rakasviba ruvara rweiyo inopfungaira quartz yaifananidzira kusuwa. Pakapfekwa quartz inopfungaira, uye dombo rikasviba, ichi chaive chiratidzo chekuti kushungurudzika kwakawanda kwaifanira kugadziriswa nemupfuri. Munyika dziri munharaunda yeAlpine, hurungudo dzakasimuka nemichinjikwa zvichiri kutemwa kubva kune quartz inopfungaira.
Iyo yekurapa mhedzisiro yeutsi hwe quartz
Kunyangwe kana kupora kwehumwe mabwe anozivikanwa, gara uchitsvaga rubatsiro rwechiremba kana paine chakakomba kana chakapfava zviratidzo. Aya anotevera ekurapa mhedzisiro yeinopfungaira quartz dombo inozivikanwa kwazvo.
Kana iyo quartz inopfungaira ikaiswa padumbu kana padumbu, ichazorodza marwadzo akakomberedza gadziriro yekugaya. Dombo rinofanira kuburitswa mushure mekushandisa. Chaizvoizvo, kugaya zvinoreva kugaya chikafu. Icho chiri nezve kuita kwekutyora chikafu kuita zvinovaka muviri izvo muviri unogona kutora nekushandisa. Muviri unoshandura zvinovaka muviri kuita zvekuvakisa.
Kushaya simba kwekubatanidza matissue
Kana dombo rakapfekwa pamuviri kana kuti rakabatwa muruoko, zvinobatsira kudzivirira hutachiona hunonamira. Iyo inosanganisa maturusi chimiro icho chiri chikamu chenhengo dzese dziripo mumuviri wemunhu. Iyi nyowani inobatanidza inodzivirira nhengo, pakati pezvimwe zvinhu.
Quartz inopfungaira inosimbisa mhasuru uye inogadzikana pamapfupa nemajoini. Iri dombo rakanyanya kukodzera kutendon hutachiona, kukuvara kwetendon nekuda kwemitambo uye mhasuru dystrophy.
Kana paine chishuwo chevana, mukadzi anogona kupfeka quartz inopfungaira pamwe chete nejaspi tsvuku, moonstone, jade uye rose quartz pacheni. Usiku chishongo chinogona kuiswa mugirazi remvura, uye vese vaviri vanogona kunwa mvura padumbu risina chinhu mangwanani. Chete ita izvi kana pasina matambudziko epanyama ari kukonzeresa kushaya mwana.
Quartz inopfungaira inobatsira pakurwisa kutya kana dombo rakabatwa muruoko. Simba rinoburitswa nedombo kudivi rinozodzikamisa uye rinogona kudzikisira kurwisa kwekutya.
Kana iwe uchinzwa kunetseka mamiriro ari kuuya, iwe unogona kutora utsi hwequartz mune ese ruoko. Zvisina kujekeswa zvienzaniso zvinogona zvakare kushandiswa pane izvi. Simba redombo rinogadzikisa muviri wako.
Iyo inopfungaira quartz inokubatsira iwe kukurira kusuwa uye inounza kuwirirana mumweya wako. Unogona kupfeka dombo paganda sechishongo kana kuibata muruoko rwako. Nekuda kwekudzikamisa mhedzisiro, iyo inopfungaira quartz inobatsira iwe kufunga zvakajeka uye nekupa kusuruvara kwako nzvimbo.
Ruvara, mafomu ekutengeserana nenzvimbo
Ruvara rweiyo inopfungaira quartz inosiyana kubva kuutsi hwebrown kusvika kune nhema. Zviratidzo zvakasviba zvakanyanya zvinonzi morion. Iyo rose kota inowana ruvara rwayo kuburikidza nekuvapo kwealuminium, lithiamu, uye radioactive radiation. Iyo inopfungaira quartz inowanikwa mune geode, yakatemwa uye yakakoromoka fomu.
Kana matombo adonhedzwa, matombo akaomarara anoendeswa kumberi neshure nejecha nemvura mudhiramu. Nenzira iyi, iyo micheto uye madonhwe anotemwa, uye iwe unowana inotsvedzerera pamusoro. Iyo inopfungaira quartz inowanikwa uye inogadziriswa pasi rese.
Discharge uye kuchaja iyo hutsi quartz
Kana iwe ukapfeka dombo rakakosha kune hutano, rinofanira kucheneswa nguva dzose. Dombo rinoburitsa simba rakanaka kuburikidza neiyo vibration frequency yeanopfeka. Simba risina kunaka kubva kumunhu akapfeka gem rinosanganiswa. Utsi hwe quartz hunogona kuburitswa nekuibata pasi pemvura inoyerera kwemaminetsi mashoma kamwe pamwedzi. Kuti udzore iyo inopfungaira quartz mumashure, iwe unogona kuisa dombo rakaoma kweinongoita husiku humwe chete paboka rematombo makristasi.
SELENITE THE ANGEL Dombo: Kufungisisa uye Energy mu…